नयाँ भवनपछि विद्यार्थी बढाउने अभियानमा दरबार हाइस्कुल « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 20 November, 2020 2:02 pm
काठमाडौं । गोरखा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलको आकर्षक नवनिर्मिति भवनका कक्षकोठाहरु अहिले खाली छन् । विश्वव्यापी कोभिड–१९ को जोखिमका कारण विद्यार्थीहरु घरबाटै इन्टरनेटको सहयोगमा अनलाइन अध्ययन गरिरहेका छन् ।
त्यसो त मुलुकमा कोरोना भाइरसको जोखिम नभएको भए पनि अहिले यस विद्यालयमा उल्लेख्य विद्यार्थी भने हुने थिएनन् । पछिल्ला समयमा निःशुल्क पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण घटेको ठानेर शहरी क्षेत्रका अभिभावकहरुले महँगो शुल्क तिरेर निजी (संस्थागत) विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन थालेका छन् । जसका कारण यस्ता ऐतिहासिक र सुविधासम्पन्न सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएका हुन् ।
मुलुकको राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको नयाँ भवन र प्रयोशालाहरुको सुविधायुक्त तथा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने यो सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन मेहनत गरिरहनु पर्ला ? या अब यहाँ आफैँ विद्यार्थी बढ्लान् ? विद्यालयका व्यवस्थापन र शिक्षक वर्गमा पनि अहिले यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यहाँका केही शिक्षकहरु भने अब विद्यार्थी आफैँ बढ्नेमा आशावादी छन् । उनीहरु भन्छन्, “कोरोना नभएको भए अहिलेदेखि नै विद्यार्थीको आकर्षण हुन्थ्यो । अबका केही वर्षमा यहाँ भर्नाका लागि भीड हुनेछ । अभिभावकहरु आएर हात जोडेर मेरो बच्चा राखिदिनुस् भन्न थाल्नेछन्, त्यो अवस्था केही वर्षमै आउनेछ ।”
वास्तवमा काठमाडौंको मुटुमा रहेको रानीपोखरीसँगै अवस्थित दरबार हाइस्कुलको नयाँ भवन मौलिक र आकर्षक छ । पाँच वर्षअघिको विनासकारी भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएको सो भवन पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलको हाताभित्र हाल भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सञ्चालित छन् । कूल चार तले उक्त नयाँ भवनमा ४६ ओटा कक्षाकोठा छन् । भवनभित्र विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, चमेनागृह, पुस्तकालय र ठूलो हलसमेत व्यवस्थित गरिएको छ । चीन सरकारको लगानी र प्राविधिक कार्यमा दुई वर्षको अवधिमा रु ८५ करोड ५९ लाखमा निर्माण सम्पन्न गरिएको दरबार हाइस्कुलको कक्षाकोठाभित्र प्रयोग हुने टेबल, कुर्सीलगायत सम्पूर्ण भौतिक संरचना समेत चीन सरकारले नै उपलव्ध गराएको छ । चीन सरकारको सहयोग बनाइएका अन्य विद्यालयमा यस्तै सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
हाल भानु मााविमा कक्षा एक देखि १० सम्म २०३ र संस्कृत माविमा ३ सय जना विद्यार्थी छन् । शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको प्रभाव बढेपछि यस्ता ऐतिहासिक महत्वका सामुदायिक विद्यालयमा समेत विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको यथार्थबीच यहाँका शिक्षकहरु आगामी दिनमा विद्यार्थी बढाउन जुटेका छन् । निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धाकै लागि यस विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममै पठनपाठन गराउँदै आएको छ ।
आधुनिक र सुविधासम्पन्न भौतिक संरचनाका साथै प्रयोगशालाहरुसमेत रहेकाले अगामी दिनमा गुणस्तर पनि बढ्ने भानु माविका प्रधानाध्यपक अखिलेश आजात अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरी पठाइदिन अनुरोध गर्दै विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट बनाउने जिम्मा विद्यालयको भएको बताउँछन् । प्रधानाध्यापक आजादका अनुसार यस वर्षदेखि यहाँ सम्पूर्ण कक्षामा अग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालिएको छ र अबका केही वर्षमा विद्यार्थी खोज्न शिक्षकहरु लागिरहनु पर्ने छैन ।
सरकारले प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको निर्णय गरेपछि सुरु हुने गरी विद्यालयले यसै वर्षबाट बालविकास कक्षा सञ्चालनको पनि तयारी पूरा गरेको छ । भानु माविमा निजी स्रोतका समेत २१ जना शिक्षक रहेको विद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । संस्कृत माविमा १६ जना शिक्षक छन् । संस्कृत माविका शिक्षक माधव लामिछानेका अनुसार कक्षा ६ देखि १२ सम्म संस्कृत पढ्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थीहरु बढी आउने गरेका छन् । दरबार हाइस्कुलमै पढेका लामिछाने विसं २०४७ मा भानु माविमा दुई हजार २ सय ५० सम्म विद्यार्थी रहेको स्मरण गर्छन् । यहाँको संस्कृत माविकै उत्पादनका व्यक्तिहरु अहिले मुलुकको राजनीति र अन्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका छन् । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र बद्री पाण्डे तथा कूटनीतिज्ञ प्रा।डा।जयराज आचार्यलगायतले यहीँबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका थिए । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि यस विद्यालयका उत्पादनको उपस्थिति रहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि विसं १९१० असोज २७ मा नेपालमा पहिलो औपचारिक विद्यालय ‘दरबार हाइस्कूल’ स्थापना गरेका थिए । राजा माहाराजाका छोराछोरीले मात्रै पढ्न पाउने गरी स्थापना गरिएको यो हाइस्कुलमा अंग्रेजी पढाउन बेलायतबाटै शिक्षक ल्याइएको इतिहासहरुमा उल्लेख छ ।